कसरी एक आईफोन | | को ब्याट्री परिवर्तन गर्न आईफोन समाचार
कसरी आईफोन the को ब्याट्री परिवर्तन गर्ने
एक समस्या जुन हुनु हुँदैन तर सामान्य छ त्यो हो उपकरणको ब्याट्री असफल हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई टेक्निकल सेवामा लिनुपर्नेछ यसलाई बदल्नको लागि वा यदि हामी धूर्त छौं भने हामी आफैं गर्न सक्दछौं। आईफोन,, अवश्य पनि यस सम्बन्धमा असफल हुन सक्छ। यो गर्न, कुनै पनि प्रकारको मर्मतको साथ, iFixit कसरी आईफोन the (प्लस उस्तै हो) को ब्याट्री परिवर्तन गर्ने बारे मर्मत गाइड प्रकाशित गरेको छ।
तपाईलाई चरणहरू देखाउनु अघि म दुई कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो त्यो हो आईफोन वारेन्टी अन्तर्गत हुनेछ, कम्तिमा, सेप्टेम्बर २०१ until सम्म (युरोपेली संघमा), त्यसैले यो आफैले आफैलाई मर्मत गर्ने प्रयास गर्नु हाम्रोलागि राम्रो विचार होईन। सब भन्दा समझदार कुरा भनेको एप्पलसँग कुरा गर्नु हो र एप्पल स्टोरमा जानको लागि अपोइन्टमेन्ट गर्नु हो वा हाम्रो आईफोन लिनका लागि क्यारियर पठाएको हो। दोस्रो कुरा त्यो हो यो गाइड धूर्त मानिसहरूका लागि होयो गाईड होईन जुन केवल कसैले गर्न सक्छ। त्यसैले यदि तपाईं धूर्त हुनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं यो गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईं जोखिमहरू लिनुहुन्छ, यो तपाईंको निर्णय हो।
तार्किक रूपमा, काम सुरु गर्नु अघि, हामीले आईफोन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ एक सेकेन्डको लागि निन्द्रा बटन थिच्दै र अफ स्लाइडर स्लाइडिंग गर्दै।
1 हामी अगाडि प्यानल हटाउँछौं
1.1 हामी एक सक्सन कप को उपयोग गर्छौं यदि हामी iSlack छैन
2 हामी ब्याट्री निकाल्छौं
हामी अगाडि प्यानल हटाउँछौं
1 चरण: हामी दुई टी हटाउँछौंPentalobe किनारहरु।
चरण २: हामी आईस्लाकको साथ अगाडि प्यानल हटाउँछौं।
चरण २: हामी आईफोनको तल सक्सन कप राख्छौं र ह्यान्डलहरू खोल्दछ।
चरण २: हामी आईफोन कडा गर्छौं र iSlack को ह्यान्डलहरू बन्द गर्दछौं।
यदि हामीसँग iSlack छ भने हामी STEP5मा जान्छौं।
हामी एक सक्सन कप को उपयोग गर्छौं यदि हामी iSlack छैन
STEP A: हामी सक्सन कप स्टार्ट बटनको ठीक माथि राख्छौं।
STEP B: जब हामी आईफोनलाई थिच्दछौं, हामी सक्सन कप तान्छौं र कोमल लीभर बनाउँछौं।
STEP C: हामी सक्सन कप हटाउन क्यापमा छुन्छौं।
5 चरण: हामी ध्यानपूर्वक अगाडि प्यानल उठाउछौं।
6 चरण: हामी माथिल्लो भाग लिफ्ट गर्छौं। ड्रप गर्न धेरै क्लिपहरू छन्।
7 चरण: हामी छविमा scre स्क्रू हटाउँछौं।
El सुन्तला १.1.7 मिमी छ
El पहेंलो १.3.1 मिमी छ
को रातो १.२ मिमी हो
8 चरण: हामी अगाडि प्यानलबाट केबल समर्थन हटाउँछौं।
अर्को steps चरणहरूमा केवल केबल जडानकर्ताहरूलाई लिफ्टमा धेरै होशियार हुनुहोस्।
9 चरण: हामी फ्ल्याट उपकरणको साथ कनेक्टर विच्छेद गर्दछौं।
10 चरण: हामीले सुरुवात बटनबाट कनेक्टर बिच्छेदन गर्‍यौं।
11 चरण: हामी डिजिटलाइजर कनेक्टरबाट केबल विच्छेद गर्दछौं।
12 चरण: हामी डाटा प्रदर्शनबाट केबल कनेक्टर बिच्छेदन गर्दछौं।
13 चरण: हामी अगाडि प्यानल हटाउँछौं।
हामी ब्याट्री निकाल्छौं
14 चरण: हामी शिकंजा हटाउँछौं।
El रातो १.2.2 मिमी छ
El सुन्तला १.3.2 मिमी छ
15 चरण: हामी ब्याट्री कनेक्टर समर्थन हटाउँछौं।
16 चरण: हामी ब्याट्री चलाउँछौं। तपाइँले प्लास्टिकको उपकरण प्रयोग गर्नुपर्दछ र धेरै होशियार हुनुहोस्। हामी यसलाई बिगार्न सक्ने मदरबोर्डमा क्राइम नगर्न सावधान रहनुहोस्।
17 चरण: हामी तल्लो किनारबाट चिपकने ट्याब हटाउँछौं।
18 चरण: हामी बिस्तारै रीड तान्दछौं। हामीले ब्याट्री वा तल्लो कम्पोनेन्टतिर तान्न प्रयास गर्नुपर्दैन वा हामी चिप्लप टेप फाल्न सक्दछौं।
19 चरण: हामी ब्याट्रीको तल्लो दायाँ कुनामा चारैतिर तान्छौं। तपाईं यस चरणमा प्रतिरोध वृद्धि देख्नुहुनेछ।
20 चरण: हामी अघिल्लो जस्तै दोस्रो Adhesive फ्ल्याप हटाउँछौं।
21 चरण: हामी ब्याट्रीको तल्लो बायाँ कुनामा चारैतिर तान्छौं। हामी फेरि बढी प्रतिरोध महसुस गर्नेछौं। हामी अन्य कुनामा जस्तै गरे।
22 चरण: हामी प्लास्टिकको कार्डबाट ब्याट्री हटाउँछौं। हामी सतर्क हुनुपर्दछ कि मदरबोर्डलाई नहेर्नुहोस्। हामीले कार्ड जति सक्दो फ्ल्याट गर्नुपर्दछ वा हामी ब्याट्री डबल गर्न सक्दछौं।
23 चरण: हामी ब्याट्री निकाल्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी आईफोन the को ब्याट्री परिवर्तन गर्ने
के तपाई गम्भीरताका साथ इफिक्सआईट गाइडबाट लिइएको समाचारको एक टुक्रा गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई केहि थाहा छैन, यति थोरै हालको सामग्री छ?
LukasAR लाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो ट्यूटोरियल, मैले मेरो एक साथीलाई सहयोग गरेको छु र ऊ खुसी छ! जानकारी को लागी धेरै धन्यबाद।
Ifixit लाई म अनुमान गर्छु धन्यवाद ...
फोटो ट्यूटोरियलमा बधाई छ, यो अविश्वसनीय राम्रो छ।
व्यक्ति रब्बलका लागि (तिनीहरूलाई अन्यथा कल नगर्नुहोस्), उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि तेस्रो पक्षहरूको लागि ट्यूटोरियलहरू बनाउनको लागि सधैं प्रशंसा गरिन्छ।
कृतज्ञ हुनु भन्दा टाढा, म तपाईंलाई अर्को पटक नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्न जाँदैछु पछि पछाडिको कामको बारेमा सोच्न सोध्छु।
ट्यूटोरियलमा बधाई छ, तपाईंलाई यो अधिक वा कम मनपर्न सक्छ। तर यो निर्विवाद छ कि यो ज्ञान नभएको व्यक्तिको लागि बनाईएको हो।
Blanico लाई जवाफ दिनुहोस्
JIM लाई जवाफ दिनुहोस्